Thet Naing Swe (01/11/2017)
မြန်မာပြည်ရဲ့ လူပျိုစင် ညောင်ဦးဖီးကျွန်း 🌴🌴
ဒီလိုCrystal ဖြစ်နေတဲ့ပင်လယ်ရေမျိုးတွေဟာ မော်ဒိဗ့် မှာပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်.. ကိုယ်တို့မြန်မာပြည်တောင်ဘက်စွန်းက ကျွန်းတွေမှာလဲ ရှိတယ်ရှင့်.. 😍
အရင်တပတ်က မြိတ်ကျွန်းစုတွေဆီကိုယ်ခြေဆန့်ခဲ့တယ်.. သွားခဲ့တဲ့ကျွန်းတွေအများကြီးထဲက ကိုယ်အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ကျွန်းလေးတစ်ခုအကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်.. ကျွန်းနာမည်က ညောင်ဦးဖီးကျွန်း .. သိပ်ကိုမြန်မာဆန်တဲ့နာမည်.. ဒီနာမည်ကြားရုံနဲ့တင် ဒီနေရာဟာမြန်မာပြည် ပိုင်နက်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစွာတွေးမိမှာပဲ.. ဘာလို့ အဲ့ဒီနာမည်ပေးထားတာလဲလို့ ဒေသခံတွေကို ကိုယ်မေးတော့ မြန်မာသူရဲကောင်းနာမည်တွေကိုပေးထားတာတဲ့.. အဲ့ဒီနားမှာ ငထွေးရူးကျွန်း .. ငလုံးလက်ဖယ်ကျွန်း တွေလဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီး မြေပုံကြီးကို ပြတယ်.. အဲ့ဒါဆို ကျန်စစ်သား ကျွန်းက ဘယ်မှာလဲလို့ ဆိုတော့ သူက အဲ့ဒီအချိန် မဏိစန္ဒာနဲ့ အလုပ်ရူပ်နေလို့ ဒီနားမှာမပါတာဆိုပြီး ကိုယ့်ကို အရွှန်းဖောက်လေရဲ့... မြိတ်ကျွန်းစုတွေကို Virgin Islands တွေလို့ခေါ်ကြတယ်.. လူတွေအရောက်အပေါက်နည်းလို့ အားလုံးဟာ သဘာဝအတိုင်း မပျက်မစီးပဲ လှပနေသေးတဲ့အတွက် အပျိုစင်လေးလိုတည်ရှိနေလို့အဲ့လိုတွေ ခေါ်ကြတာပေါ့.. အခု ညောင်ဦးဖီးဆိုတာ မြန်မာ့သူရဲကောင်း ကြီးဆိုတော့ ကိုယ်က လူပျိုစင်ကျွန်းလို့ တင်စားလိုက်တာပါ.. 😎
💦ပင်လယ်ရေတွေ... ပုံတွေမှာသာကြည့်တော့လို့ ကိုယ်ပြောပါရစေ.. ဒါတောင်မိုးတွင်းကုန်ခါစလေး ကိုယ်သွားလို့ ဒီလောက်ပဲကြည်နေတာ.. နောက်လတွေဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုတွေတောင် ကြည်လင်နေမလဲမသိနိုင်ဘူးရယ်.. မော်ဒိဗ့် ကပြန်လာပြီးထဲက ဘယ်ပင်လယ်မှာမှ ရေမကူးချင်တော့ဘူးလို့ကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာ မြိတ်ကျွန်းစုတွေလဲရောက်ရော မဲသဲသွားတော့တာပဲ..ရေက ကမ်းစပ်မှာတစ်ရောက်.. နည်းနည်းနက်ရင် နောက်တစ်ရောင်.. နဲ့ သုံးရောင်လောက်ကိုဖြစ်နေတာ..လှေအကြည်လေးစီးတုန်းကဆို ပင်လယ်အောက်က ငါးတွေပါမြင်နေရတာ.. ကိုယ်မြန်မာပိုင်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့ ပိုလို့တောင်ကျေနပ်မိတယ်.. နောက်အချိန်မရွေး လေယာဉ်လေးစီးပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲကိုယ် ၁၆ ခါလောက်လာနေလို့ရတာလဲ ကျေနပ်တယ်..
ရေနူးပြီး လူကမျော့မျော့ကျန်တဲ့အထိ ရေငုပ်ခဲ့တာ.. snorkeling လုပ်ရတာလဲ ရေနက်တွေထဲမဟုတ်ပဲ ကျွန်းတွေနဲ့ကပ်ရပ် ဆိုတော့ ရေတိမ်ပြီး ငုပ်ရတာစွန်းမိုက်ပဲ.. ငါးတွေနောက်ကိုလိုက်ကူး သန္တာကျောက်တန်းတွေဆိုတာလဲလှမှလှပဲ.. ဒါမြန်မာ့ရေပိုင်နက်ဆိုတာကိုတောင်မေ့မေ့သွားတယ်.. နီမိုအိမ်လေးတွေတာ အားကြီးပဲရော.. ကျွန်းနားလေးမှာတင်ငုပ်စရာနေရာတွေ ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ပေါနေရလဲမတွေးနိုင်ဘူး.. သိပ်လှတဲ့ရေအောက်ကိုကြည့်နေရတာ နဲ့ အိမ်မက်ထဲရောက်နေသလိုပဲ..
အဲ့ဒီကျွန်းကို ကိုယ်အကြွေဆုံးကိုပြောပါဆိုရင် .. ရွက်ဖျင်တဲကြီးတွေနဲ့ အိပ်ရတာပဲ.. ပင်လယ်ထဲကနေလှမ်းကြည့်ရင်မမြင်ရပဲ သစ်ပင်အုပ်တွေထဲ ပျောက်နေတဲ့ ဒီတဲကြီးတွေထဲ ကိုယ်အိပ်ရတာ သိပ်နှစ်ခြိုက်တာပဲ.. တဲရှေ့မှာ သစ်ပင်တွေဘယ်လောက်များလဲဆို နေပြောက်တောင်မထိုးဘူး.. Reception ကနေ တဲတွေဆီသွားတဲ့လမ်းကိုက သစ်သားတံတားလေးနဲ့ တောအုပ်ထဲရောက်သွားသလိုပဲ.. Aircon မရှိဘူး.. Air cooler လေးနဲ့ ခြင်ထောင်လေးတွေထောင် .. တဲကို ဇစ်လေးဆွဲပြီး ခြင်လုံတဲ့ စကာလိုမျိုးလေးပဲ ပိတ်လိုက်တယ်.. ဝင်စမ်း လတ်ဆတ်နေတဲ့ လေတွေ. လိူင်းပုတ်သံတွေက တဝုန်းဝုန်းနဲ့.. မိုးလင်းရင် ငှက်သံလေးတွေအရင်ကြားရတယ်.. ပင်လယ်လိူင်းနဲ့ တေးဆိုနေတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ.. သစ်ပင်လေတိုးသံတွေ က ကိုယ့်ကို good Morning လို့ပြောနေသလိုပဲ.. သိပ်ကြိုက်တာပဲ.. တဲရှေ့ ကွပ်ပစ်မှာ ထိုင်ပြီး အင်တာနက်လဲမရတော့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ နှပ်နေရုံပါပဲ.. ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ခနအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး သဘာဝတရားရဲ့လှပမူတွေကိုခံစားနေလို့ရတယ်..
ဒီလိုနေမှာမှာ ဒီလောက်ထိ service ကောင်းမယ်လို့ ကိုယ်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး.. ဝန်ထမ်းတွေ တော်တော်သဘောကောင်းပြီး ဘက်စုံရတယ်.. ယဉ်ကျေးတယ်.. ဖော်ရွေတယ်.. နိုင်ငံတကာ resort တွေက GO ( Gentle Organizer ) တွေလိုပဲ.. စာပွဲထိုးကနေ ညဘက် entertainment အထိသူတို့ပဲ.. ညဘက် မီးကစားပြတာ နဲ့ ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုပြတာ တော့ မိုက်ချက်ပဲ..
အရင်က ညောင်ဦးဖီးကျွန်းကို ဒီအတိုင်းသွားလည်လို့ရပေမယ့် ကျွန်းပေါ်မှာညအိပ်လို့မရသေးဘူး..မနှစ်ကမှ ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တစ်ညအိပ် .. နှစ်ညအိပ် စတဲ့ ဖြင့်လာရောက်တည်းခိုကြတာ.. ကော့သောင်းမြို့ကနေ speed boat နဲ့ နှစ်နာရီလောက်သွားရတဲ့ ညောင်ဦးဖီးကျွန်းဟာ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အစွန်းမှာတည်ရှိပါတယ်.. ကျွန်းဆီသွားတဲ့လမ်းမှာတော့ ဇာတက်ကြီး .. ဇာတက်ကလေးကျွန်းတို့နဲ့ တခြားကျွန်းများစွာကိုဖြတ်သွားရပြီး သူ့ဘေးမှာတော့ ငထွေရူး ကျွန်းနဲ့ သိပ်လှတဲ့ ခက်ရင်းခွကျွန်းတို့ တည်ရှိပါတယ်..
ရန်ကုန်ကနေ ကော့သောင်းသို့.. ✈️✈️
ကော့သောင်းဆိုတာမြန်မာပြည်တောင်ဘက်နယ်နိမိတ်စွန်းမှာတည်ရှိပါတယ်.. အခုဆိုရင် ကားလမ်းပေါက်နေပြီဖြစ်ပြီး လိုင်းကားတွေ ပြေးဆွဲနေပေမယ့် ကားစီးချိန် ၂၄ နာရီကိုတော့ ဘယ်သူ့မှ အချိန်ကုန်မခံချင်ကြပါဘူး.. ကားခ ကလဲ တယောက်ကို ၄ သောင်းခွဲလောက်ရှိလို့ စျေးလဲမသေးဘူးရယ်.. ကိုယ်ကတော့ နိုင်ငံပိုင်လေကြောင်းဖြစ်တဲ့ Myanmar National Airlines နဲ့သွားခဲ့တာပါ.. ကော့သောင်းကိုရောက်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော လေကြောင်းလိုင်းပါ.. လူလဲအမြဲလိုပြည့်လို့ သွားမယ်ဆိုရင် လက်မှတ်ကြိုတင်ဝယ်ထားဖို့လိုပါတယ်.. ထာဝယ်မှာ ခနရပ်ပြီးကော့သောင်းကိုခရီးဆက်ချိန် နဲ့ အားလုံးပေါင်း ၁ နာရီ ခွဲလောက်ကြာပါတယ်..ပြည်တွင်းသွားတယ်ဆိုပေမယ့် လေယာဉ်ကကြီးလို့ အေးဆေးနဲ့ ဖြတိလာတဲ့ ကျွန်းတွေဓါတ်ဖမ်းလို့သိပ်ကောင်းတယ်.. လယာဉ်နဲ့ဆိုတော့ ကော့သောင်းရောက်ရင် ပင်ပန်းမနေပဲ တန်းပြီးလျှောက်လည်လို့ရတယ်.. ( နောက်တစ်ပိုစ့်မှ ကော့သောင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ ကျွန်းတွေအကြောင်းတင်ပါမယ်) လေယာဉ်လက်မှတ်ကတော့ တကြောင်းကို ၁ သိန်း ၂ သောင်း လောက်ရှိပါတယ်.. လေယာဉ်ကတော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်ထွက်ပြီး ကော့သောင်းကို တနာရီ ဝန်းကျင်လောက်ရောက်ပါတယ်..
ညောင်ဦးဖီးကျွန်းနေ့ချင်းပြန်ခရီး နဲ့ ၁ ညအိပ် သွားမယ်ဆိုရင် ကော့သောင်းမှာ အနည်းဆုံး ၂ ညအိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကော့သောင်းမှာ ရွေးစရာ ဟိုတယ်သိပ်မရှိပါဘူး..4star hotel Victoria Cliff နဲ့3star hotel Garden ဆိုတာလောက်ပဲရှိပါတယ်. ကျန်တာတွေကတော့ သိပ်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးရယ်.. VC ကတော့ တညတစ်ခန်း ကို ၁ သိန်း ၁ သောင်းလောက်ရှိပြီး Garden ကတော့ သုံးသောင်းခွဲပါ.. ဖြစ်နိုင်ရင် VC မှာပဲနေပါလို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်..ကော့သောင်းကနေ ၁၅ မိနစ်ပဲ ဘုတ်စီးသွားရတဲ့ သဌေးကျွန်းက Grand Adaman5star မှာလဲ နေလို့ရတယ်.. သူကတော့ တခန်းကို ဘတ် ၂၇၀၀ ( မြန်မာငွေ ၁ သိန်း ၁ သောင်း) လောက်ပေးရပါတယ်..
ညောင်ဦးဖီးကျွန်း ဆီသို့.. 🛥🛥
ကျွန်းကို နေ့ချင်းပြန်သွားလည်လို့ ရသလို တညအိပ် နှစ်ည အိပ် စသဖြင့်လဲ နေလို့ရပါတယ်.. လှေက မနက်အစောကြီးထွက်လို့ ရောက်တဲ့နေ့ ကော့သောင်းမှာ တညအိပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှ ကျွန်းကိုသွားလည်ရမှာပါ..
နေ့ချင်းပြန်: ဘတ် ၃၅၀၀ ( မြန်မာငွေ ၁ သိန်း ၄ သောင်းခန့် )
မနက် ၈ နာရီ လှေဆိပ်ကနေ speed boat ထွက်ပါတယ်.. life jackets တွေရော.. snorkeling guide တွေပါ နှစ်ယောက်သုံးယောက် boat ပေါ်မှာထားပေးထားပါတယ်.. ရေမကူးတတ်လဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး.. သူတို့က အနီးကပ်စောက်ရှောက်ပေးတယ်.. မြန်မာ ဂိုက်တွေသာမက ယိုးဒယားဂိုက်တွေလဲပါပါတယ်.. လှေပေါ်မှာ အအေး.. ရေ.. အသီးတွေလဲကျွေးပါတယ်.. ကျွန်းနားရောက်ခါနီး သူဠေးမကမ်းခြေနဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေတို့မှာ snorkeling လုပ်ရပါတယ်..
နေ့လည်စာကို ကျွန်းပေါ်မှာလူများရင်တော့ ဘူဖေးကျွေးပြီး .. လူနည်းရင်တော့ set menu နဲ့ကျွေးပါတယ်.. နေ့လည်စာစားပြီး ကျွန်းမှာပဲရေကူး အနားယူ.. နေပူစာလူံ.. လှေလှော်.. ဓါတ်ပုံရိုက် .. စသဖြင့်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်.. ညနေ ၄ နာရီမှာကျွန်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး ကော့သောင်းကို ညနေ ၆ နာရီမှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှာပါ..
ညောင်ဦးကျွန်း တစ်ညအိပ်.. ဘတ် ၆၉၀၀ ( မြန်မာငွေ : ၂ သိန်း ရ သောင်း ကျော်)
ကိုယ်တွေကတော့ တညအိပ်ခရီးစဉ်ကို ရွေးခဲ့တယ်.. သူလဲ မနက် ၈ နာရီ ဟိုတယ်ကနေ ကားလာကြိုပြီး လှေဆိပ်ကနေ speed boat နဲ့ထွက်ပါတယ်.. လမ်းမှာ snorkeling site နှစ်နေရာဝင်ပြီး ရေငုပ်ကြတယိ.. ပြီးရင် hotel မှာ check in ဝင် နေလည့်စာစားပြီး ခနနားပါတယ်.. နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ နောက်ထပ် snorkeling site နှစ်နေရာနဲ့ သိပ်လှတဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကို ထပ်ပို့ပေးပါတယ်.. ညနေပိုင်းဟိုတယ်ပြန်လာပြီး အေးဆေးအနားယူလို့ရပါတယ်.. ည ရ နာရီလောက်မှာတော့ ညစာ စကျွေးပါတယ်.. တော်တော်လေးကို ကောင်းတယ်.. ဂဏန်းချက်.. seafood BBQ တွေလဲပါတယ်.. ကိုယ်တွေလွှတ်ကို ဆွဲတာပေါ့.. ညစာစားပြီး တော့ ဝန်ထမ်းတွေကပဲ သောင်ပြင်မှာ ဖျော်ဖြေတယ်.. သီချင်းဆို.. ရိုူရာအကတွေကတယ်.. မီးကပြတာလဲ တော်တော်လေးကို လှတယ်.. ကွပ်ပစ်လိုနေရာကနေ လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ အားပေးရတာ ကြိုက်မှကြိုက်ပဲ..
မနက် breakfast ကိုကမ်းခြေမှာသွားစားပြီး .. လှေစီး.. ဘဲရုပ်စီး.. ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်..ကျွန်းအရှေ့က ရေထဲမှာပဲ ထပ်ပြီး snorkeling လုပ်ကြသေးတယ်.. နေ့လည်စာစားပြီး နေ့လည်လောက်မှာ ကော့သောင်းကိုပြန်ကြတာပေါ့..
နှစ်ညအိပ် : ဘတ် ၉၀၀၀ ( မြန်မာငွေ ၃ သိန်း ၆ သောင်း )
သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်.. ပိတ်ရက်ရှည်တွေရှိရင် အဲ့လိုမျိုးနှစ်ညအိပ်သွားနေချင်တယ်.. တညအိပ်ခရီးစဉ်လိုမျိုး အားလုံးတူတူပဲဖြစ်ပြီး.. နေ့လည်စာ ညစာတွေပိုသွားပြီး .. တညပိုအိပ်ရမှာပဲ ကွာမှာဖြစ်ပါတယ်..
တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ ဒီခရီးစဉ်အားလုံးဟာ နေ့တိုင်းမထွက်ပါဘူး. ကော့သောင်းရောက်မှ နောက်နေ့ဝယ်ပြီး လိုက်သွားလို့မရပါ.. လူအနည်းဆုံး ၁၀ ယောက်ပြည့်မှ ထွက်လို့ ကြိုတင်စုံစမ်းပြီး ဝယ်ယူထားမှ သေချာပါမယ်.. ညအိပ် ခရီးစဉ်ဆိုလဲ လူများတဲ့ နေ့မှာ အခန်းပြည့်သွားနိုင်လို့ သတိထားဖို့လိုပါမယ်..
ကိုယ်တွေကတော့ ရန်ကုန်မှာထဲက ဟိုဘက်က ကျွန်းတွေသွားလည်ဖို့ကို ကြိုပြီး ဝယ်ထားခဲ့တာ.. ကျွန်းကိုသွားမယ့်ရက်နဲ့ ချိန်ပြီး လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်မှာမို့လို့ပါ.. ကိုယ်တွေဝယ်ခဲ့တဲ့ တိုးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်.. မေးသမျှလဲစိတ်ရှည် လက်ရှည်သေချာဖြေလို့ကိုယ်နဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်.. Grand Moby တဲ့.. 09253949317 အဲ့ကိုဆက်ပြီး ကျွန်းထွက်မယ့်ရက်လေးတွေမေးပြီး ဘိုကင်ကြိုတင်ခိုင်းထားလို့ရပါတယ်.. booking တင်မယ်ဆို ကိုယ့်ဆီကနေ code နံပါတ်လေးတွေလာတောင်း သူတို့စျေးလျော့ပေးလိမ့်မယ်.. :)
🌺နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ်ထက်စာရင် အနည်းဆုံးတစ်ညအိပ်မှ ကျွန်းရဲ့အလှကိုသေချာ ခံစားနိုင်မှာပါ..
🌺လူကြီးတွေပါရင် ရွက်ဖျင်တဲထက် air con ခန်းတစ်ခန်းတော့ယူပါလို့... တစ်ယောက်ကို ဘတ် ၁၀၀၀ လောက်ပိုပေးရနိုင်ပါတယ်..
🌺 မုန့်တွေဘာတွေစားချင်ရင် ကော့သောင်းမှာထဲက ကြိုဝယိသွားပါ.. ကျွန်းမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး.. ဘီယာတွေဘာတွေဝယ်သောက်လို့ရပေမယ့် စျေးတော့နည်းနည်းကြီးတယ် .. ကိုယ်တွေကတော့ ဝယ်သွားပါတယ်..
🌺 ပင်လယ်ရေထဲဆင်းပြီးရင် ချက်ချင်း ရေချိုပြန်ချိုးပါ.. ယားတက်လို့ပါ.. ယားရင် ဆရာခိုလေးဘာလေးဆောင်သွားပြီး လိမ်းလို့ရပါတယ်..
🌺 ရေငုပ်ရင်.. ရေတိမ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကျောက်ဆောင်နဲ့ငြိတတ်ပါတယ်.. သတိထားပါ..
🌺 speed boat နဲ့ ပင်လယ်ထဲသွားရမှာဆိုတော့ မူးတတ်ပါတယ်.. အချိုလေးတွေ သကြားလုံးလေးတွေဆောင်သွားပါ..
🌺suncream , UV lotion, ရေကူးဝတ်စုံ.. ရေစိုခံအိတ်.. ရေစိုခံကင်မရာ .. ခြင်ပြေးကပ်ခွာ/ ဖြန်းဆေး .. ဦးထုပ် စတာတွေ ယူသွားပါ..
🌺 ကော့သောင်းမှာ MPT နဲ့ Telenor သာမိပါတယ်.. ညောင်ဦးဖီးမှာတော့ ဖုန်းမမိပါ.. wifi ရှိပေမယ့် Reception မှာသာမိပါတယ်..
🌺 အထူးသတိပေးမှာချင်တာက ရေအောက်မှာရှိတဲ့ သက်ရှိ.. သက်မဲ့ သန္တာကျောက်တန်းတွေကို မထိ.. မကိုင်.. မချိုးဖဲ့ပါနှင့်.. ယူမသွားပါနဲ့ .. ဒီအတိုင်းလေးပဲ မျက်စိနဲ့ခံစား ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးယူသွားပါ.. သိပ်လှတဲ့အပျိုစင်လေးတွေကို သဘာဝအတိုင်းရှိပါစေ.. နော်...